I-Software Monitoring Software | Uhlelo lokusebenza lwamathebhulethi we-iPads ne-Employee's Kid
I-TheneneSpy - I-New Edge ye-Experience Tracking!
BUKA i-DEMOKODWA KANJE
Sebenzisa i-TheOneSpy Monitoring Software kumathebulethi aseSim asekelwe futhi uthole okuningi kunangaphambili
Uma ucabanga, njenge-Monitoring softwares, I-TheOneSpy nayo ivinjelwe ekulandeleni ama-smartphone, wawungalungile. Ngoba siyazi ukuthi kunokuningi kubantu ukuthi yini i-smartphones yabo ethwala. With TheOneSpy ungase futhi uqapha on amaphilisi - iOS noma i-Android esekelwe - ukuze ukwazi okwengeziwe.
I-iPads, i-Android, uyiqamba ... sinamathebulethi ahlanganisiwe
Kunabantu abaningi kunamakhompyutha abo - okuningi okuningi. Izinto eziningi abangakwazi ukuzenza ngamafoni abo, ziphethe amaphilisi abo, njenge-e-izincwadi, imibhalo yangasese, futhi, ngezinye izikhathi ngisho nezithombe. Njengoba amaphilisi elula kakhulu ukusebenzisa futhi ephathekayo kunama-laptops, futhi unikeza izici eziningi kunezingcingo, ngokuvamile zikhetha labo abahlala behamba-njengabafundi. Kodwa akusiyo njalo esetshenziselwa izinhloso ze-studious.
I-TheneneSpy ikuvumela ukuba uqaphe zonke izinhlobo zamathebulethi, kungakhathaliseki ukuthi isebenza kanjani.
Ngakho ulanda manje futhi uzuze kuzo zonke izici ezinikezayo.
Hlola ukuthi ubani obizile ngefoni yabo ye-Android noma ithebhulethi, ngokubuka irekhodi labo lokushaya ucingo. Ungakwazi ngisho nokulalela izingcingo zabo zibukhoma, zirekhode bese uzivimbela.
Ukushintshwa kwedivayisi okungenamkhawulo
Ungashintsha ukuqapha phakathi kwanoma iyiphi inombolo yamadivayisi kulayisensi eyodwa. Idatha etholakala kuwo wonke amadivayisi izobe igcinwe kudeshibhodi yakho siqu, futhi akukho datha yedatha yezinsiza ezizobekwe eceleni.
Imiyalo ye-SMS eyikude
Ungathumela futhi imiyalo kudivayisi yabo nge-SMS. Imiyalo ye-SMS ingakusiza ukuthi uqale noma yikuphi uhlelo lokusebenza kudivayisi yakhe, umise noma yikuphi uhlelo lokusebenza, ume isikhashana noma yikuphi uhlelo lokusebenza, futhi usebenzise ngisho nemakrofoni yedivayisi yakho.
NgeTheOneSpy kudivayisi yabo, ungakwazi ukuqapha imisebenzi yabo ye-Inthanethi, futhi, ngokufinyelela isiphequluli sewebhu. Ungathola ukuthi yiliphi ikhasi abafinyelele kulo, nini nokuthi kungakanani. Ungathola futhi ukulandwa abakwenzile nge-Intanethi.
Lalela noma Qopha Okuzungezile
Ukusebenzisa imilayezo ye-SMS yesilawuli kude, ungasebenzisa imakrofoni kudivayisi yakho futhi ulalele izindawo ezizungezile noma ubhale phansi noma nini lapho uthanda.
Thola ukuthi ziphi lapho ulandelela ifoni yabo ye-Android noma ithebhulethi ngokusebenzisa i-Tracker ye-TheOneSpy. Lesi sici sikuvumela ukuba ubuke izixhumanisi eziqondile zesimo sabo ngaso sonke isikhathi nge-GPS.
Thola oxhumana nabo abalondolozile kudivayisi yabo. Ungabuka imininingwane ephelele yocingo ngalinye: igama labo, inombolo yefoni, inombolo ye-landline, ikheli le-imeyli, ikheli leposi, imininingwane yamakhasi omphakathi - konke okulondoloziwe eduze kwegama labo.
Funda imiyalezo yamatheksthi ayitholayo futhi ithumele ngomakhalekhukhwini wabo we-Android. Yazi imininingwane yomthumeli ngamunye kanye nomamukeli ngamunye, kanye nesitembu sesikhathi nesethi ye-SMS ngayinye.
Kanye nedatha egcinwe kudivayisi yabo ye-Android, ungabuka izithombe zabo. Lokhu kuhlanganisa izithombe ezithathwe yidivayisi ngokwazo, lezo ezitholwa nge-MMS kanye nalabo abalayishiwe phezu kwe-Intanethi.
Ukusekelwa kwePlatform amaningi
Ungashintsha futhi phakathi kwamadivaysi asebenza kumahlelo ahlukene asebenzayo, afana ne-Android, iOS kanye ne-BlackBerry OS, ngaphandle kokuthenga ilayisensi entsha evela kuTheOneSpy.
Buka ukubekwa okwenziwe ngokufinyelela izingxenye zekhalenda noma izikhumbuzi zefoni noma tablet. Ungathola usuku kanye nesikhathi sokuqokwa okubekiwe kuwo wonke umshini wabo.
Hlola idivayisi yabo ukude
Awutholi lutho lokulahlekelwa futhi iqiniso kuphela lokuzuza. Ngakho kungani ungangeni ku-TODAY?
Faka noma iyiphi idivayisi ye-Android / iOS ne-TheOneSpy's App bese uqala ukuhlola kuzo MANJE.
Iyini i-TheOneSpy's Android / iOS Tablets Monitoring Software Do?
I-TheOneSpy's Monitoring App ikuvumela ukuba ulandelele cishe zonke izinhlobo ze-Android / iOS ezisekelwe (iPads) namathebulethi kanye nama-laptops. Uma ufaka iSofthiwe kunoma iyiphi idivayisi ye-Android / iOS enikeziwe, cishe cishe konke kodwa uyayithola.
Hlola EZINYE EZIPHUMA